पूर्वप्रधानमन्त्रीकै यौन भिडियो टेलिभिजनबाट प्रशारण भएपछि…. « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
पूर्वप्रधानमन्त्रीकै यौन भिडियो टेलिभिजनबाट प्रशारण भएपछि….
प्रकाशित मिति : २०७६, ११ मंसिर बुधबार १२:०३
क्यासानोभको नीजि अपार्टमेन्टभित्र गरिएको यौनक्रिडा कस्ले छायाँकन गर्यो ? कसरी गर्यो? किन ग¥यो ? भिडियो कसरी टेलिभिजनसम्म पुग्यो ? प्रश्न अनेक उठेपनि प्रहार क्यासानोभ र नाटालिया बाहेक अरुले खेप्नु परेन । सहज अनुमान हो–खुबिया एजेन्जीमार्फत राष्ट्रपति पुटिनले सो भिडियो कैद गराएका थिए ।
१२ मे २०११ का दिन दुनियाँका सामू यस्ती महिला प्रस्तुत भइन जो कहिल्यै सुनिएकी थिइनन् । नाफिसाटो डियालो नाम गरेकी श्यामस्वत बर्णकी महिला एकाएक अन्तराष्ट्रिय समाचार माध्यममा ब्रेकीङ समाचारका रुपमा छाइन् । न्युयोर्कको एक होटलमा सरसफाइको काम गर्ने ती महिलाले एक ग्राहकले आफूमाथि बलत्कारको प्रयास गरेको उजुरी दिइन् । आरोपित व्यक्ति थिए–अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका निर्देशक डोमिनिक स्ट्रस खाँ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा व्यवश्थापनमा प्रभावकारी कदम चालेर आर्थिक क्षेत्रमा ख्याती कमाएका खाँ फ्रान्सको भावि राष्ट्रपतिका रुपमा गनिएका थिए ।
१५ बर्षिय छोरीकी आमा समेत रहेकी ३२ बर्षिय डियालोमाथि बलत्कारको प्रयास गरेको आरोपमा खाँ बिमानस्थलबाट पक्राउ परे । उनको गिरफ्तारीले न्यूयोर्क र पेरिसमात्र तातेन, समग्र विश्व तरँगित भयो । बहुचर्चित सो घटनाको पटाक्षेप भने भिन्दै हिसावले भयो ।
अफ्रिकी देशबाट अमेरिका आएर अमेरिकामा शरणार्थीका रुपमा बसेकी डियालोले विगतमा अमेरिकामा शरण पाउनाका लागि असत्य कथा रचेको पाइयो । कर छली, संकास्पद कारोबार आदिजस्ता पृष्ठभूमीका कारण उनीप्रति प्रहरी, न्यायाधीवक्ता र अदालत सशंकित देखिए । गहन अनुसन्धान र अनेक कागजातका आधारमा उनले खाँलाई लगाएको आरोप सत्य हो भनेर विश्वास गर्न नसकिने निश्कर्ष निकालियो ।
खाँले डियालोको आरोपबाट मुक्ति पाएपनि उनको जीबनमा लागेको डडेलो निभेन । भाबी राष्ट्रपतिको रुपमा फ्रान्समा लोकप्रिय रहेका खाँका बारेमा देशभित्र पनि अनुसन्धान शुरु भयो । उनीमाथि अरु दर्जन महिलाले आरोप लगाए । तर, कुनैपनि आरोप प्रमाणित हुन सकेनन् । आरोप सही बेठीक बेग्लै, खाँको राजनीति भने सकियो ।
महरा प्रकरणका कारण राजनीतिभित्रको यौनका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । यसका बाछिटा कालान्तरसम्म रहिरहने छन् । हालै मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा एक युवा नेता जसै अट्ने चर्चा नेकपाजनले गर्थेे ।
गाइँगुइँ अनुसार उनीमाथि युवा संगठन आबद्ध नेतृहरुलाई पदको प्रलोभन दिएर शोषण गरेको गम्भीर आरोप छ । केहीले आफूमाथि हिँसा भएको खबर बालुवाटारसमक्ष पुर्याईपनि सकेका थिए । कारण जे भएपनि अकाट्य भनिएको नाम मन्त्रीको सूचीबाट काटियो ।